नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : आरोप, प्रत्यारोप, छेडखानीमै ब्यस्त नेता र दलहरु, देश र जनताका लागि कोही देखिएनन जिम्मेवार !
आरोप, प्रत्यारोप, छेडखानीमै ब्यस्त नेता र दलहरु, देश र जनताका लागि कोही देखिएनन जिम्मेवार !
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैसाखी टेकेर एमालेसँग लड्न नसकिने बताएका छन् । उनले गठबन्धनप्रति लक्षित गर्दै बैसाखी टेकेर मात्र होइन सबै मिलेर आए पनि एमालेलाई हराउन नसक्ने दाबी गरे । एमाले कपिलवस्तुले सोमबार आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश तथा वृहत् जनसभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले बलियो साँढे नेपाली काँग्रेसले बैसाखी टेकेर दायाँ र वाँया गरेको बताए ।
यसै बिच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफू चुनावी गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताएका छन् । सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले गठबन्धनलाई सैद्धान्तिक हिसाबले पुष्टि गर्न नसकिने बताए ।
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातर्फ लक्षित गर्दै थापाले अहिले गठबन्धनका नाममा अरु पार्टीलाई भोट हाल्न लगाइएका मतदातालाई कांग्रेसमा फर्काउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गरे । ‘अहिले रुखबाहेक अन्त भोट हाल्न लगाएका मतदातालाई कांग्रेसमा फर्काउन सकिन्छ ?’, उनले सोधे ।
गगनले थपे, ‘देशभरका लाखौं मतदातालाई रुखबाहेक अन्यत्र भोट हाल्न भन्ने हो भने तिनले भविष्यमा रुखमै भोट हाल्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? अहिले हँसिया हथौडा र कलममा भोट हालेको मतदाताले अर्को चुनावमा रुखमा भोट हाल्ला त ?’
अरु सदस्यलाई जस्तै थापालाई पनि समयको पाबन्दी थियो । उनले बोल्दा बोल्दै ५ मिनेट सकिएको जानकारी समय सूचकले घण्टी बजाएर दिएपछि उनले आफ्नो भनाइ टुंग्याएका थिए ।
बैठकमा महामन्त्री थापाले भने, ‘नेपालमा कम्युनिस्टबाट लोकतन्त्रलाई खतरा छ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौं, के अब कम्युनिस्टलाई मिल्न नदिएर लोकतन्त्र बचायौं भनेर जाने हो ? कम्युनिस्टबीच तालमेल हुन नदिनु नै लोकतन्त्र हो त ?’
उता नेपाली कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धनको पक्षमा प्रमुख नेताहरू प्रखर रूपमा खुलेका छन् । केन्द्रीय कार्य समितिको जारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनको समूहभन्दा इतरका नेताहरूको समेत बलियो समर्थन देखिएको छ ।
सोमबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केपी ओलीलाई बलियो बन्न नदिन पनि कांग्रेसले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मत दिनुपर्ने बताए ।
उनले अहिलेका लडाइँ एमालेविरुद्ध भएकाले गठबन्धन जरुरी रहेको जिकिर गरेका छन् ।
बैठकमा पौडेलले भने, ‘केपी ओलीलाई कुनै हालतमा बलियो बन्न दिनु हुँदैन । बरु समाजवादी र माओवादीलाई मत दिएर एमाले साइजमा राख्नुपर्छ । यो लडाइँ एमालेविरुद्ध हो । त्यसैले गठबन्धन जरुरी छ ।’
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले पार्टीले आगामी चुनावमा केन्द्रबाट जबरजस्ती गठबन्धन लाद्नु गलत हुने बताएका छन् । सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले गठबन्धन केका लागि गर्ने भन्दै प्रश्न उठाए ।
कोइरालाले भने, ‘गठबन्धन कोसँग किन र केका लागि गर्ने ? गठबन्धनभन्दा पार्टी एकतामा जोड दिऊँ ।’
उनले गठबन्धन गर्नेभन्दा पनि तलैबाट पार्टीभित्र एकता र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कोइरालाले थपे, ‘गठबन्धन माथिबाट गर्ने, तर तलका कार्यकर्ताबीच चाहिँ एकता हुन नसके के हुन्छ अवस्था ? हामीले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । केन्द्रबाट गठबन्धन लाद्ने कुरा नगरौं ।’
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले १० बुँदे सहमति गरेर आफूलाई धोखा दिई एमालेमै बसेका नेताहरू अवसरवादी र ओलीका दास भन्दै उनीहरू कुनै पनि बेला कुटिन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपा एस निकट युवा संघको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गदै अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग विद्रोह गर्न नसकेर १० बुँदेका नाममा एमालेमा बसेकाहरू निरीह रहेको र उनीहरूलाई फरक मत राख्न समेत अधिकार नरहेको बताए ।
उनीहरूको सहारा र सल्लाहमा ओलीविरुद्ध लडाइँ लडेकोमा उनीहरूले अन्तिममा धोखा दिएको नेपालले बताए । नेपालले केपी ओलीले पार्टीभित्र पहिले देखिनै गुन्डा र साइबर स्यालहरूको जमात तयार पारेकाले त्यहाँभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई कुनै पनि बेला हातपात हुन सक्ने बताए ।
अध्यक्ष नेपालले केपी ओली अझै पनि राजावादीहरूसँगको षड्यन्त्रमा रहेको बताउँदै पाँच दलीय गठबन्धन तीनै तहको चुनावमा हुने बताए । उनले युवा संघलाई गाउँ तहदेखि नै चुनावी तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।
उता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रोल्पा नवनिर्वित भ्यूटावरको उद्घाटन गरेका छन् । उनले क्रान्तिकालमा मात्रै नभएर रोल्पाले शान्तिकालमा पनि विकास-निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए ।
जनयुद्धको पछिल्लो दुई वर्ष आफूले रोल्पाका गाउँबस्तीमा बिताएको प्रचण्डले स्मरण गरेका थिए ।
उनले सुनाए, ‘लडाइँका बेला अप्ठेरो पर्‍यो भने म रोल्पा आउने गर्थेँ । भेटघाट र अन्तरक्रिया गरेपछि नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुन्थ्यो । नयाँ योजना बनाएर क्रान्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउने अठोट लिएर जान्थेँ ।’
प्रचण्डले अहिले पूर्वाधार विस्तारमा रोल्पाले राम्रो प्रगति गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
‘रक गार्डेन र भ्यूटावरले राम्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रोल्पालाई विकास गरेको छ । यसलाई स्वर्गद्वारीसँग् जोडे देशभरिबाट नै पर्यटक आउनेछन् ।’
भ्यूटावरले जनयुद्ध संग्रहालयको पनि भूमिका खेल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
‘म असाध्यै खुसी र गौरवान्वित भएको छु’ प्रचण्डले भने ।
यसै बिच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था पुनः स्थापनाको सम्भावना नेपालबाट समाप्त भएको जिकिर गरेका छन् ।
राप्रपा नेपालले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो १५ वर्षको राजनीतिक परिवर्तन र पूर्वराजाको दलप्रतिको आक्रमण सोचले राजसंस्था पुनः स्थापनको सम्भावनालाई समाप्त पारेको बताए ।
राजसंस्थाको पुनः स्थापना नेपालकै राजनीतिक दल र आमजनताले गर्ने भए पनि पूर्वराजाले आफ्नो भावना सार्वजनिक गर्दा दलप्रति वितृष्णा फैलाउने काम मात्र गरेकाले राजसंस्था पुनः स्थापनाको सम्भावना समाप्त भएको अध्यक्ष थापाले प्रस्ट पारे ।
उनले राजसंस्था पुनः स्थापनाको वकालत गर्ने एक मात्र पार्टी राप्रपामा पूर्व राजा र उनको सचिवालयले गरेको चलखेलका कारण आफू नयाँ बाटोतर्फ लागेको प्रस्ट पारे ।
अध्यक्ष थापाले आउने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट धेरै अपेक्षा नराखे पनि देशकै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा राप्रपा नेपालका उम्मेदवार चुनाव लड्ने जानकारी दिए ।
प्राप्त अर्को समाचार अनुसार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पार्टीका नेता भीम चापागाईँले पार्टीमा नरहेको घोषणा गरेका छन् ।
पार्टीका व्यूराे सदस्य रहेका नेता चापागाईँले कपिलवस्तुमा केन्द्रीय समिति बैठक सकिए लगत्तै सोमबार विज्ञप्तिमार्फत पार्टीमा नरहेको घोषणा गरेका हुन् ।
क्रान्तिकारी पार्टीले स्पष्ट राजनीतिक लाइन पास गर्नुपर्नेमा दोधारे नीति लिएको भन्दै त्यसमा आफ्नो असहमति रहेको चापागाईँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले नेतृत्व तहमै आएको सैद्धान्तिक विचलनकै कारण बैठकले स्पष्ट राजनीतिक लाइन लिन नसकेको बताएका छन् ।
पार्टीको मुख पत्र रातो खबरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै मनाङको सेक्रेटरीसमेत भइसकेका चापागाईँले यसअघिको चुनाव बहिस्कारको क्रममा होनहार योद्धाको शहादत र कयौँ योद्धा घाइते हुनको साथै दर्जनौँ योद्धा अझै पनि जेलमै रहेको अवस्थामा पार्टीले घुमाउरो तरिकाले पार्टी संसदीय भासमा नै फस्ने खेलमा लागेको बताएका छन् ।
‘संसदीय चुनाव धोको हो भन्दै यसअघि बहिस्कार गर्ने क्रममा होनहार योद्धाको शहादत र कयौँ योद्धा घाइते हुनको साथै दर्जनौँ योद्धा अझै पनि जेलमै छन् । घुमाउरो तरिकाले पार्टी संसदीय भासमा नै फस्ने खेल नेतृत्वबाट नै हुनु आफैमा ठूलो विडम्बना हो । जुन कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । यसबाट म लगायत सम्पूर्ण क्रान्तिकारी योद्धा, मुक्ति कामी जनसमुदाय र क्रान्तिकारी आन्दोलनप्रति ठूलो कुठाराघात भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले लिएको दोधारे राजनीतिक लाइनप्रति असहमति राख्दै आजका मितिबाट म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नरहेको यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी समेत गराउँदछु।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।